6 Mibvunzo Yekuzvibvunza Iwe Usati Watanga Yako Webhusaiti Dhizaini | Martech Zone
Kuvaka webhusaiti kunogona kunge kuri basa rinotyisa, asi kana iwe uchifunga nezvazvo semukana wekutarisazve bhizinesi rako uye nekurodza mufananidzo wako, iwe unodzidza zvakawanda nezve yako marangi, uye ungatonakidzwa nekuzviita.
Sezvo iwe paunotanga, urwu runyorwa rwemibvunzo runofanira kubatsira kukuendesa iwe munzira chaiyo.
Chii chaunoda kuti webhusaiti yako iite?
Uyu ndiwo mubvunzo wakakosha kupindura usati watanga rwendo urwu.
Funga nezve "hombe mufananidzo". Ndezvipi zvinhu zvitatu zvepamusoro zvaunoda kana zvaunoda kubva pawebhusaiti yako? (Zano: Unogona kushandisa chinyorwa ichi kuti chikubatsire kuwana mhinduro!)
Iwe uri chitoro-uye-dhaka chitoro chinoda kupa ruzivo pane yako nzvimbo uye zvaunazvo muchitoro? Kana, iwe unofanirwa kugonesa vatengi kukurumidza kutarisa, kutenga, uye kutenga kubva kune yako saiti? Vari vatengi vako vari kutsvaga zvinokurudzira zvemukati? Uye, vangade here kusaina e-tsamba tsamba yezvimwe zvirimo?
Tora zvese zvaunoda pasi pabepa wozviisa pamberi. Ipapo, iwe unogona kushandisa iyi runyorwa kana uchiongorora vanopa webhusaiti, vagadziri, uye vanogadzira.
Kubva kuruboshwe kurudyi: Saiti yakakosha inotaurisa zvakakosha, An Ecommerce saiti inokutendera iwe kutengesa online, uye mablog anobvumidza iwe kugovana zvirimo uye mazano.
Marii yaungakwanise kushandisa?
Funga bhajeti yako uye ongorora zvese zvinodhura usati watora kukwakuka. Ive neshuwa yekushanda padhuze nenhengo dzese dzechikwata kuti utore kunze kunonzwisisika runyorwa rwemari. Zvinogona kuitika kuti bhajeti yako inoita yakawanda yako sarudzo iwe.
Kana iwe uri kushanda pabhajeti yakaoma, yako yepamusoro inoda runyorwa ichakubatsira iwe kuona izvo zvinofanirwa kuiswa pekutanga. Iwe uchazoda iri nyore kumhara peji, kana izere saiti? Kana iwe uri tech savvy uye usingade tsika, peji imwe chete yekumhara yakavakirwa pane template inogona kukumhanyisa isingasviki $ 100 / gore. Kana iwe uchida kugadzira nekukudziridza izere webhu app neyakajairwa backend maficha, iwe ungangove uchizobhadhara pamusoro pe $ 100 / awa yechirongwa chinogona kutora mazana emaawa.
Une nguva yakawanda sei?
Semutemo wenguva dzose, ipfupi iyo inotungamira-nguva yekuvaka webhusaiti, inowedzera mutengo. Saka kana webhusaiti yako iri yakaoma - kureva kana iine mapeji mazhinji akasiyana kushambadzira yakakura mhando yezvigadzirwa nemasevhisi - iwe uchazoda kuve nechokwadi chekumisikidza zvine musoro kuvhura purogiramu yekudzivirira zvisina kukodzera mari yakakwira.
Izvo zvakati, kuvaka webhusaiti hakufanirwe kutora zvachose. Ngatiti iwe unongova nevhiki dzinoverengeka: Unogona kusarudza template yakavakwa kubva kuWordPress kana imwe chikuva. Nyore, dzinoyevedza mablogiki anogona kumisikidzwa nekukurumidza, uye iwe unogona kutogona kusanganisira mashoma tsika tsika, futi.
Kana iwe uchida kupa nguva yako webhusaiti kuvhura ine yakatarwa zuva kana chiitiko, ita shuwa kuti iwe unotaurirana izvo kumberi. Ungangoda kupira kumwe kushanda mukudzoka nekukurumidza.
Une chiratidzo chakajeka here?
Yako webhusaiti inofanirwa kuratidza pachena mhando yako kuti vatengi vakuone uye vakuyeuke. Uku kujekesa chinhu chakakosha kuvaka mhando yako yekubudirira kwenguva refu. Zvinhu zvakaita seyako logo, mifananidzo yemusoro, masitayera emenyu, pendi dzemavara, typography, mifananidzo, uye zvemukati zvese zvinobatsira kune yako brand mufananidzo, uye inofanirwa kunge ichienderana.
Kana iwe usati wakamboshanda nemuoni wekugadzira pane yako brand, ita kumwe kwekutanga kurova kwewebhu kune mienzaniso yakanaka yemhando dzinoenderana kubva kwaunogona kuwana kurudziro. Iwe uchaona kutaridzika kwemawebhusaiti uye nekunzwa kwakasiyana pawebhu nekuda kwekambani kara, font, uye sarudzo dzinoonekwa. Ive neshuwa yekujekesa kutarisa kwekambani yako uye nekunzwa mupfungwa dzako kuti ubatsire kutungamira yako webhusaiti dhizaini sarudzo. Kana iwe uchida rubatsiro, 99designs inopa masevhisi muchimiro chemakwikwi emakwikwi ayo anogona kukubatsira iwe kuongorora mhando dzakasiyana "tarisa uye unzwe", kutanga neako logo.
Ndezvipi zvemukati zvandinoda?
Kunonoka mukugadzirwa kwemukati kunogona Pushisa webhusaiti kutangisa kumashure. Wako webhu dhizaini kana mushambadzi haazonyora yako kopi, sarudza yako portfolio mafoto, kana kuisa pamwechete ako vhidhiyo zvipupuriro. Gadzira runyorwa kutanga kwa zvose zvirimo zvauchada kuunganidza (kana kuburitsa), uye yakasimba purogiramu yemisi yakatarwa uye mabasa. Izvi, zvakare, zvinofanirwa kuenderana neyako brand uye zvaunoda vateereri. Semuenzaniso, kana iwe ukatengesa zvipfeko zvevana zvemukati zvako zvinofanirwa kutaura naamai, baba, uye pamwe naambuya. Uye, yako yekutora mifananidzo inofanirwa kuratidza mifananidzo yevana vanonyemwerera vanotaridzika vakanaka mutsetse wako wekupfeka.
Chii chaunoda - uye unovenga?
Nyora zvese zvinoitika uye zvinoonekwa uye marongero aungade kuongorora nekunzvenga, uye uve nemienzaniso yemawebhusaiti iwe aunoda paruoko (uye tsananguro dzekuti nei uchivada). Edza kutsvaga se "webhu dhizaini" paPinterest kuti utange. Iyo yakajeka seti yezvaunofanira kuita nezvisingaitwe zvichaita kuti dhizaini dhizaini ive nyore kwazvo, uye kuisa zvaunofarira pamberi penguva zvinogona kukuchengetedza iwe matani emisoro isingakoshi yemusoro pasi pemugwagwa.
Pinterest tsvaga inokurudzira webhu dhizaini.
Tags: muchisobhajetikurongakuronga webhusaitiZvinotadzisa nguvawebhu dhizaini bhajetiwebhusaiti dhizaini kurongawebhusaiti zvinangwakurudziro yewebhusaitikuronga webhusaiti
Yakawanda Sei Iyo Infographics Inodhura? (Uye Maitiro Ekuchengetedza $ 1000)